၂ ရေချိုးခန်းရေချိုးနစ်မြုပ် Faucet ခရုမ်း
ပင်မစာမျက်နှာ / ရေချိုးခန်း Faucets / ရေချိုးခန်း Faucets နှစ်ဆကိုင်တွယ်ပါ / ကျယ်ပြန့်သော 2-Handle High-Arc ရေချိုးခန်း Faucet Chrome
ကျယ်ပြန့်သော 2-Handle High-Arc ရေချိုးခန်း Faucet Chrome
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 5.005ထဲကအပေါ်အခြေခံပြီး 25 ဖောက်သည် ratings
ရေချိုးခန်း၏မျက်နှာသွင်ပြင်ကိုချောချောမွေ့မွေ့အသေးစိတ်ကျသောဒီဇိုင်းဖြင့်နှစ်ထပ်လက်ကိုင်ထားသောနီကယ်ရေချိုးခန်းနစ်မြုပ်သည့် Faucet သည်သင်၏ရေချိုးခန်းအားအမြဲတမ်းအလှတရားကိုပေးစွမ်းလိမ့်မည်။
2321300C installation ကိုညွှန်ကြားချက်
ပရီမီယံအရည်အသွေးမြင့်ဂန္ပုံသဏ္layာန်ပျံ့နှံ့နေသော faucet: အစိုင်အခဲကြေးဝါသံမဏိရေချိုးခန်း faucet 2321300C။ ခရုမ်းအဆုံးသည်ချေးမှုကိုခံနိုင်သည်။ မြင့်မားသောတံဆိပ်ခတ်သောကြွေထည်နှင့်ရေချွေတာသော neoperl aerator ။ လွယ်ကူသောစီးဆင်းမှုနှင့်ရေအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်နှစ်ချက်လက်ကိုင် setup ။ (ကြိုတင်မှာယူခြင်းမပြုမီသင်၏ရေစုပ်ပမာဏကိုအကဲဖြတ်ပါ။ )
တီထွင်ဆန်းသစ်မှုမြန်မြန်သောဆက်သွယ်မှုနည်းပညာ သစ်သား faucet နှင့်အတူပိုက်တပ်ဆင်တာဝန်ခံကိုချွေပါ။ သင့်ရဲ့အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်အပျေါမှာအာကာသချိန်ညှိသည်။ အိမ်၊ ကွန်ဒိုမီနီယံ၊ တိုက်ခန်းတစ်ခန်း၊ မော်တာအိမ်များ၊
ရိုးရှင်းသောစီးဆင်းမှုနှင့်ရေအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် setup ကိုနှစ်ခါစီမံပါ။ အိမ်၊ ကွန်ဒိုမီနီယံ၊ တိုက်ခန်းတစ်ခန်း၊ မော်တာအိမ်များ၊
SKU: 2321300C Categories: ရေချိုးခန်း Faucets, ရေချိုးခန်း Faucets နှစ်ဆကိုင်တွယ်ပါ Tags: ရေချိုးခန်းစုပ် faucets, ကျယ်ပြန့်ကိုင်တွယ်, ပွတ်မှာ chrome
12.1 x ကို 8.5 x ကို 3.1 လက်မ
ကို C *** r2020-06-01
ငါဒီ faucet ကိုအဓိကအားဖြင့်ဝယ်ခဲ့တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒါဟာရရှိနိုင်တဲ့အမျိုးအစားတွေထဲကအသက်သာဆုံးပဲ။ ဒါပေမယ့်လွယ်လွယ်ကူကူတပ်ဆင်ရတာကပြန်ဝယ်လိုက်တာပဲ။ လ်တာများကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်၎င်းတို့သည်အခွံမာများကိုတိုက်ရိုက်တင်းကျပ်ခြင်းထက်အခွံမာများဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသော screw နှစ်ခုဖြင့်၎င်းတို့ကိုတင်းကျပ်စွာချုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ရေစုပ်စက်အောက်ရှိကျဉ်းကျဉ်းသောနေရာများတွင်ကြာရှည်ကိုင်တွယ်သောလိမ်ဖဲ့ခြင်းကိုကြိုးစားရန်ကြိုးစားခြင်း၏နာကျင်မှုကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ အလားတူပင်, ရေပိုက်ပူးတွဲဖို့လိမ်သို့မဟုတ် screwing မလိုအပ်ပေမယ့်ရုံအလွယ်တကူလ်တာပေါ်သို့ရိုက်ယူခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏တစ်ခုတည်းသောနူးညံ့သောအရာများမှာယိုစီးမှုသည်အခြားမည်သည့်ပစ္စည်းများထက်မဆိုအလွယ်တကူတပ်ဆင်ရန်မလွယ်ကူကြောင်း၊ ရေပိုက်၏ပလတ်စတစ်အဆုံးများသည်ဈေးချို။ ထင်ရသော်လည်းနှစ်အနည်းငယ်ကြာအောင်မျော။ ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သွားနိုင်သည်။ ။ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူခြင်းအတွက်ဤအချက်ကိုသေချာစွာအကြံပြုပါ။
တစ်ဦးက *** ဎ2020-06-04
ငါကောင်တာထိပ်ပြန်ပေါ်ခဲ့ပြီးရေချိုးခန်းကိုဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့စီးပွားရေးချွေတာတဲ့နည်းလမ်းရှာဖွေနေခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကား faucets အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုရှိကြ၏။ သူတို့သည်တပ်ဆင်ရန်နှင့်လှပသောအလုပ်လုပ်ရန်ရှိကြသည်။ မူလရေနုတ်မြောင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ရေနုပ်မြောင်းများအတွက်ရေအားလုံးကိုစနစ်တကျစီးဆင်းစေရန်ခွင့်ပြုသည်။ ငါသူတို့ကိုအကြောင်းကြားပြီးသူတို့ကငါ့ကိုသေးငယ်တဲ့အစားထိုးထွက်စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဤထုတ်ကုန်သည်အလွန်တန်ဖိုးရှိပြီးသူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည်အထူးကောင်းမွန်သည်။
S က *** ဇ2020-06-06
ဒါကငါ့ရေချိုးခန်းစုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့ faucet အစားထိုးဖြစ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်တဲ့စတိုင်ရှိတယ်။ လက်ကိုင်တွေကပိုရှည်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုအကြိမ်အနည်းငယ်သုံးပြီးတဲ့အခါသူတို့ကမှန်တယ်။ ကျွန်မခင်ပွန်းကအရာရာတိုင်းကိုအလွယ်တကူ install လုပ်တယ်။ ငါ popup drain အင်္ဂါရပ်နှင့်ပတ်သက်။ မသေချာခဲ့ပေမယ့်ငါတကယ်ကယိုစီးမှုလီဗာကြင်နာထက်ပိုကောင်းတဲ့ကြိုက်တယ်။ အရာအားလုံးကိုကြည့်ရတာရိုးရှင်းပါတယ်။ ငါတောက်ပသော chrome ကို finish ကိုရှိသည်နှင့်ငါကချစ်ကြတယ်။ စျေးကငါကြည့်တဲ့တခြားသူတွေထက်အများကြီးပိုတတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ငါဒီအချိန်ကြာမြင့်စွာခံစားရန်မျှော်လင့်တယ်။
တစ်ဦးက *** ဃ2020-06-07
ဤအရာနှစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကျွန်ုပ်၏ရေချိုးခန်းအတွင်း၌ထားပါသည်။ လက်ကိုင်များသည်အလွန်ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်သည်။ သူတို့ကကြည့်ရတာကောင်းတယ်။ သူတို့ကစသည်တို့ကို Lowes မှာနှစ်ဆလောက်ပါလိမ့်မယ်
Y က *** င2020-06-10
အဆိုပါ faucet အချိန်မီအပ်နှင့်တပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူခဲ့ပါတယ်။ faucet အသစ်ထည့်သွင်းခြင်းထက်အဟောင်းကိုဖယ်ရှားရန်ကျွန်ုပ်အချိန်ပိုမိုယူခဲ့သည်။
R ကို *** y က2020-06-12
ဒီ faucet ကိုမာစတာအိပ်ခန်းရှိရေချိုးခန်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့စျေးနှုန်းအတွက်ထုတ်ကုန်၏အရည်အသွေးနှင့်အတူအတော်လေးသဘောကျသွားတယ်
တစ်ဦးက *** y က2020-06-13
ဤရေစုပ်စက်တွင်အရည်အသွေးမြင့်မားစွာပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါဟာစျေးကြီးတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကဲ့သို့လေးလံခံစားရသည်။ တပ်ဆင်မှုအတွက်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းအားလုံးပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကတပ်ဆင်ခဲ့ပြီးယခုအချိန်အထိကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပါသလော။ ဘာမှပြောင်းလဲလျှင် update လုပ်လိမ့်မည်
ကို C *** y က2020-06-14
ဒီ faucet ဟာလှတယ်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းကကျွန်ုပ်ကိုအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးစေခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုဆက်လက် install လုပ်နိုင်သေးသည်။
H ကို *** y က2020-06-16
ငါဒီ faucet ကိုချစ်! spout လည်ပတ်နိုင်ကြောင်းမှာလိုက်တဲ့အခါတကယ်အသုံးဝင်ပါတယ်။
အီး *** တစ်ဦး2020-06-19
အသစ်ပြုပြင်ထားသောရေချိုးခန်းအတွက် faucet အသစ်ကိုနှစ်သက်ပါ။ အလွန်ခေတ်မီခြင်းနှင့်ကြော့မော့။
တစ်ဦးက *** s ကို2020-06-21
ငါဒီ faucet ကိုချစ်။ တကယ်တော့ငါနှစ်ယောက်ဝယ်လိုက်တယ်၊ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာမတူတဲ့စတိုင်ကျတဲ့ရေချိုးခန်းတွေနဲ့ကိုက်ကြတယ်။ အဲဒါဟာတတ်နိုင်ပြီးကြံ့ခိုင်ပါတယ်။ Pop-drain သည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပြီး၎င်းကိုတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်။ အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။
တစ်ဦးက *** တစ်ဦး2020-06-26
ငါစာသားကဒီ faucet ၏စျေးနှုန်းနှင့်မည်မျှလှပနှင့်ကြော့ကြည့်လှည့်ပတ်ငါ့ခေါင်းကိုခြုံနိုင်ဘူး။ Home Depot နှင့် Lowe's တို့မှဆင်တူသူများအားစျေးနှုန်းထက်နှစ်ဆကျော်ရှာဖွေခဲ့သည်။ ဒါကကျွန်တော် install လုပ်ခဲ့တဲ့ပထမသုံးအပိုင်းအစဖြစ်ပြီးအရမ်းရယ်စရာကောင်းလှတယ်။ အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းကအရာရာကိုမျက်လုံးချင်းကြည့်ခြင်းနှင့်အပိုင်းသုံးပိုင်းလုံးကိုသေချာစွာကိုက်ညီအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်အသုံးပြုနေသောထောက်ပံ့ရေးလိုင်း၏အရှည်ပေါ် မူတည်၍ သင်အပူသို့မဟုတ်အအေးကိုနေရာမချခင်၎င်းတို့ကိုချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကိုပိုမိုတင်းကျပ်ရန်သင်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ရိုးသားစွာဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ လုံလောက်သောအရာများကိုမပြောနိုင်ပါ။ ဒါဟာအလွန်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပြီး ၁၀၀% တစ်ပြားတန်တယ်။
ကို C *** ဌ2020-06-27
ငါမကြာသေးမီကရေချိုးခန်း remodel ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ဒီ faucet ဝယ်ယူ & installed ။ ဒီအမှတ်တံဆိပ် / မော်ဒယ်ကိုကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုပြီးအခြားသူများအပေါ်ဝယ်ယူရန်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်အလွန် ၀ မ်းသာပါသည်။ အဆိုပါ faucet အသွင်အပြင်အတွက်ကြော့သည်, အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောလုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်၎င်း၏ '' ဒီဇိုင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အလွန်ထင်ကောင်းစွာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ချိတ်ဆက်မှုလိုင်းများသည်တကယ့်အပေါင်းဖြစ်ပြီးတပ်ဆင်မှုကိုရိုးရှင်းစေသည်။ တပ်ဆင်နေစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်သည်ယိုစိမ့်မှုနှင့်ပြproblemsနာများကိုမကြုံခဲ့ရပါ။ ဤရေချိုးခန်းကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုနေသဖြင့် Pop-up drain တစ်ခုထောက်ပံ့ပေးသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ဖြုတ်တပ်နိုင်သောအမြန်သန့်ရှင်းသောကောက်ခြင်းတောင်းနှင့်အတူအခြားရေနုတ်မြောင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ မကြာခင်လာမယ့်အနာဂတ်မှာအသုံးမပြုရသေးတဲ့အခြားရေချိုးခန်းတစ်ခုမှာထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ pop-up တစ်ခုထည့်သွင်းဖို့စီစဉ်ထားတယ်။
B က *** y က2020-06-28
ဤသူတို့သည်ရေချိုးခန်းများတွင်အကြီးကြည့်ရှုပါ။ ငါတို့ ၁၉၇၈ ကရိယာအဟောင်းတွေကိုဒီနေရာမှာအစားထိုးလိုက်ပြီးကွာခြားချက်ကတော့မယုံနိုင်စရာပဲ။ ဖိအားသည်အလွန်ပြင်းထန်ပြီးမြင့်မားသောမဟာသတ္တဝါသည်အရာဝတ္ထုများကိုနစ်မြုပ်စေရန်လွယ်ကူစေသည်။ တပ်ဆင်မှု၏ရိုးရှင်းမှုသည်ကျွန်ုပ်အားဤရေစုပ်စက်များကိုနှစ်သက်စေသည်။
B က *** t ကို020-07-02
ရေချိုးခန်းထဲရှိ Moen အဟောင်းသည်ဖြန့်ချိလိုက်ပြီးပြင်ဆင်ခြင်းထက်ကျော်လွန်လာသည်။ စျေးသိပ်မကြီးတဲ့အစားထိုးလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါဒီတစ်ခုအတွက်စိတ်ပူမိတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့စျေးကအရမ်းနိမ့်တယ်။ အဲ့ဒီရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်အံ့သြသွားတယ်။ ကြည့်ရတာအရမ်းကြည့်ကောင်းပါတယ်။ ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့လွယ်ကူတယ်၊ install လုပ်ဖို့လည်းလွယ်တယ်။ ငါကငါ့အတွက်ထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့သေချာစေရန် WOWOW ကနေအီးမေးလ်တစ်စောင်ရတယ်။ ဝယ်ယူနှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်
ဦး *** r020-07-12
ပထမ ဦး ဆုံးစဉ်းစားမိသည့်အလွန်ကောင်းသည့်ထုပ်ပိုးမှုကိုဖွင့်လိုက်သည်မှာသေချာသည်၊ သေချာသည်၊ သေချာသည်၊ အပြီးသတ်သည်၊ ခိုင်ခံ့သောကြေးဝါဆက်သွယ်မှုများဖြစ်သည်။ အလွန်လွယ်ကူသွားသည်။ ယင်းသည်တစ်ပါတ်အကြာတွင်ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏သက်တမ်းသည်အတွေ့အကြုံမရှိသော်လည်းယခုအထိကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်
T က *** y က020-07-14
ဒီဟာကိုစျေးနှုန်းကြောင့်မှာယူတဲ့အခါငါသံသယဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏သခင်ရေချိုးရန်အတွက် ၂ စုံစီမှာထားပါသည်။ အရမ်းသဘောကောင်းတာပဲ!! သူတို့ကကြည့်ကောင်းတယ်။ အကြှနျုပျ၏ရေပိုက်သမားအလွန်သဘောကျခဲ့ပါတယ်။ ယခုအဖြစ်ငါအလွန်အမင်းအကြံပြုလိမ့်မယ်!
B က *** r020-07-16
ဒါကရေချိုးခန်း faucet ဟောင်းကိုအစားထိုးဖို့ဖြစ်တယ်။ ငါထိုကဲ့သို့သောလှပသောလ်တာမျှော်လင့်မနေခဲ့ပါ! စျေးနှုန်းကအရမ်းကောင်းတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါအရမ်းကျေနပ်တယ်။ တပ်ဆင်မှုတစ်ခုလေပြေဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းကိုဖွင့်ရန်အချိန်မယူပါ။ အဟောင်းကိုဖယ်ရှားရန်အချိန်ပိုယူရသည်။ ဤသည်အလွန်ကြီးစွာသောဝယ်ပါ!
တစ်ဦးက *** ဎ020-07-19
ဒါဟာလှပသော ans install လုပ်ဖို့လွယ်ကူသည်။ ငါထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်အတွက်ပုံကြိုက်တယ်, ငါ့ကိုငါ့ရေချိုးခန်းထဲမှာရှိပြီးသားပိုက်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချမှုပေးသည်။ မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းအလုပ်လုပ်တယ် ခြုံငုံအမြင်စုံလင်သည်။
တစ်ဦးက *** ဇ2020-07-24
စျေးနှုန်းကွာခြားမှုကြောင့်ယခုအချိန်အထိ Moen (သို့) Delta အစားဒီရေချိုးခန်း faucet ကို ၀ ယ်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောကြည့်ရှုသည့် faucet ဖြစ်ပြီးယခုအချိန်အထိကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နေခဲ့သည်။
M က *** င2020-07-23
ဒီ faucet ၏အရည်အသွေးနှင့် finish ကိုအတူအလွန်သဘောကျသွားတယ်။ နာမည်ကြီးတံဆိပ်တွေထက်ပိုကောင်းတယ်၊ ဈေးလည်းချိုတယ်။
H ကို *** တစ်ဦး2020-07-26
အစားထိုးအဖြစ်ဒီ faucet ဝယ်ယူခဲ့သည်။ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ကောင်းမွန်သောခေတ်မီပုံစံရှိ ဆေးကြောရန်လွယ်ကူသည် အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုကြေးဝါဖြစ်ကြသည်။ Pop up drain ကိုချစ်မြတ်နိုးပါ။ ငါ့လူကဒီဟာကငါတို့ရဲ့စျေးကြီးတဲ့ faucet ထက်ပိုကောင်းတာပေါ့
တစ်နာရီအတွင်းနှစ်ခု faucets installed ။ သူတို့ကအရမ်းကြည့်ကောင်းတယ် တွန်းအားပေးအဆို့ပါ ၀ င်ပြီးရေပေးဝေရေးလိုင်းများကိုကြိုက်ပါ။ ယခုအချိန်အထိဤကုန်ပစ္စည်းသည်သင်၏ငွေအတွက်ကောင်းသောတန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်သည်
D *** ဎ2020-07-30
ဤကြည့်ရှုပုံကိုနှစ်သက်ပါ။ ရေချိုးခန်းကြော့ရှင်းစေသည်။ တပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးရှင်းလင်းလွယ်ကူသောချောမွေ့သောအသွင်အပြင်ရှိသည်။ အလွန်ချောမွေ့သောလည်ပတ်မှုနှင့်ကြီးမားသောရေစီးဆင်းမှု။
အိမ်နှင့်အတူဝယ်ယူခဲ့သောလက်ရှိ setup ကိုအပေါ်အကြီးအကျယ်တိုးတက်မှု။ setup အဟောင်းကို lowes / home သိုလှောင်ရုံမှာ $ 120 ကျော်ကုန်ကျခဲ့သည်။ ဤပုံစံသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရေစီးဆင်းမှု၊ အစိတ်အပိုင်းအသစ်များနှင့်လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ခြင်းကိုအလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ခွင့်ပြုသည်။ အရည်အသွေးကြီးလှတယ်
အမေရိကန် CONTACT ယူအက်စ်အေလိပ်စာ - ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ GREEN STE A၊ Kent၊ DOVER CITY, DE ။ ယူအက်စ်အေ Tel: 3476134901 E-mail: sales@wowowfaucet.com
မူပိုင်ခွင့်© 2020-2025 WOWOW FAUCET LLC ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။